Ady amin'ny fanolanana :: “Aoka izay ny herisetra. Ampy izay ny fahanginana”, hoy Rajoelina Mialy • AoRaha
Ady amin’ny fanolanana “Aoka izay ny herisetra. Ampy izay ny fahanginana”, hoy Rajoelina Mialy
Manoro ny lalana handresena amin’ny ady amin’ny fanolanana ny vadin’ny Filohan’ny Repoblika sady filohan’ny fikambanana Fitia, Rajoelina Mialy, ka nampirisika ny fitorohana an’ireo olon-dratsy tompon’antoka amin’ny herisetra ara-pananahana. Manaporofo ny fahavononany hiady amin’ny endrika herisetra rehetra ny fanambaràna mafonja nataony, omaly: “amin’ny maha vehivavy ahy, tena vaky ny foko. Amin’ny maha reny ahy, dia tezitra aho”.
Nanohina an’ity renimpianakaviana ity ny fahamaroan’ireo fitarainana sy vaovao momba ny trangana fanolanana, tato ho ato, ka nanaovany antso avo mba tsy hanakobonana an’ireny herisetra any anaty fiarahamonina ireny, na iza na iza. “Aoka izay ny herisetra, ampy izay ny fahanginana. Melohiko ny herisetra, sahia mitoroka sahia mijoro”, hoy ny vadin’ny Filoham-pirenena.
Narahiny toromarika tamin’ny famerenana fampahafantarana sy fanoroana ny fanatonana haingana an’ireo ivon-toerana manokana fandraisana ny fitarainana momba ny herisetra ireo hafatra ireo, toy ny etsy Mahamasina na eny Befelatanana na ihany koa ny Borigady misahana ny fiarovana an’ireo zaza tsy ampy taona. Tsy tokony hatahotra hanatona an’ireo ivon-toerana manokana ny olona. Nomarihiny fa ireo olona, izay matetika havana akaiky na fianakaviana na mpifanolo-bodirindrina ihany, no manao an’io fomba ratsy io.
Nahare trangana herisetra ara-pananahana hafa sahady Rajoelina Mialy, omaly, ka nidina haingana tetsy amin’ny ivon-toerana Vonjy, teny Befelatanana, araka ny loharanom-baovao marimpototra. Zaza iray, manodidina ny roa taona, no manaraka fitsaboana eny rehefa lasibatry ny fanolanana nataona ankizilahy, manodidina ny 16-17 taona.
Fantatra fa handray an-tanana ny fitsaboana azy rehetra ny vadin’ny Filohampirenena, izay marihina fa sady masoivohon’ny Tahiry iraisam-pirenena misahana ny mponina amin’ny lafiny fiarovana ny reny sy ny zaza.
Miantso ny fampiharana sazy faran’izay henjana amin’ireo mpanao herisetra ireo ny filohan’ny fikambanana Fitia. “Tsy ianao fa izy ireo no diso. Aza misalasala, aza matahotra”, hoy hatrany Rajoelina Mialy. Nampahatsiahiviny ny fananan-kerin’ny lalàna manokana hiarovana an’ireo olona marefo ireo.
Hery sy tosika lehibe amin’ny fampahombiazana ny ady amin’ny fanolanana izao nataon’ny vadin’ny Filohan’ny Repoblika izao, izay mila ny fiaraha-mientana sy ny fandraisana andraikitry ny sokajin’olona rehetra.
Fandrabiana fitaovam-pianarana :: Hoenjehina ireo nanasoketa ny kahie zarain’ny fanjakana